Maxkamada ciidamada ee Puntland oo fasaxday eedeysanayaal dembi lagu waayey (Dhegeysi+Sawirro) – Radio Daljir
Seteembar 9, 2013 5:38 b 0
Boosaso, September 9, 2013 – Maxkamadda derejada koowad ee ciidamda qalabka sida ee Puntlad ?laanteeda gobollada Bari, Sanaag, Karkaar, Haylaan iyo Guardafu, ?ayaa maanta sii deysey eedaysaneyaal lagu haystey dembi ah in ay qarax ka geysteen saldhigga dhexe ee Boosaaso.
Eedaysaneyaasha oo saddex ka mid ah askar yihiin, waxaa sida ay xeer ilaalintu sheegtay lagu soo oogey dembi ah in 18-kii bishii April ee lasoo dhaafay ay bumbo ku tuureen saldhigga dhexe ee booliska degmada Boosaaso.
Dable Maxamuud Axmed Saalax (Biibaaye) oo ah askari ka tirsan booliska degmada, ayey xeer ilaalintu ku soo eedeysay in bumbo nooca gacanta ah uu saldhigga ku tuurey, iyadoo 4-ta kalena lagu soo eedeeyey in ay falkaas gacan ku siiyeen.
Qareenka eedeysaneyaasha ayaa sheegay in dadka uu wakiilka ka yahay aysan wax dembi ah gelin, caddeyn suganna aan loo lahayn dembiga loo haysto oo ah mid culus. sidoo kale eedeysaneyaasha ayaa iska fogeeyey eedeyntan, iyagoo maxkamadda ka codsaday in dib xorriyaddooda loogu soo celiyo.
Cabdikariin Xasan Firdhiye oo ah guddoomiyaha maxkamadda derejada koowad ee ciidamda qalabka sida ee Puntland? laanteeda gobollada Bari, Sanaag, Karkaar, Haylaan iyo Guardafu, ?ayaa ugu dambeyntii ku dhawaaqay go’aanka ay maxkamaddu gaartey.
Wuxuuna sheegay in maxkamaddu ay xukuntay in dhammaan eedeysaneyaasha dib xorriyaddooda loo siiyo, maadaama xeer ilaalintu ay ku guul dareysatay in ay soo gudbiso caddeymo sugan iyo markhaantiyaal dhameystiran.
Qaar kamid ah dadka ay maxkamaddu sii deysey oo la hadlay Rado Daljir, ayaa ka warbixiyey dareenkooda ku aaddan in dib xorriyaddooda loo siiyey, maadaama ay muddo 4 bilood ka badan xirnaayeen.
Maalmo ka hor ?ayey ahayd markii sidan oo kale maxkamadda derejada kowaad ee ciidamada qalabka sida ee Puntland, ?ay xukunno kala duwan ugu riddey7askari oo lagu soo eedeeyey in sannadkii hore dhamaadkiisii ay markab MV Deason lagu magacaabo ka afduubeen meel u dhow magaalada Boosaaso.
DHEGEYSO: War-bixinta uu diyaariyey Maxamed Salaad Xaaji Diriri oo daljir ka tirsan